Saamaynta afafka hore ee afafka hore ee afafka yurubiyanka: qulqulka qadiimka ah ee ereyada luqadaha Masaarida, aduunka oo dhan, waxay gabi ahaanba badaleen isbarbardhiggooda Greek iyo Latin; sidaas darteedna Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Isbaanish, Talyaani, iyo dhammaan luqadaha kale ee ka yimid qoyska Greco-Latin
Markii ay Gariigtu soo weerareen Fircoonic Afrika muddadii u dhexaysay -332 illaa 30 AD, iyo Roomaanka oo afkoodu yahay Latin 30 ilaa 641, kala guurka ereyada qadiimiga ee Masar iyo ereyada yurubiyanka sidaas darteed waxay dhacday muddadan in kabadan lix qarni.
Saamaynta ereyada qadiimiga ah ee qaybtan Afrika ka mid ah ereyada Yurub, iyada oo loo sii marayo Griiga iyo Latinka, waxay u dhacday laba siyaabood: marka hore saameynta ereyada erayada; ka dibna by xididdada Griigga iyo Latin sida ereyada "Acte, Sémi", iwm (...), sida xididka Griigga "Sharciga" (dhawaaqday AKT) oo macnaheedu yahay "Shaqo" oo Giriig ah iyo Kemet.
Markii asliga Griiggu saameyn ku yeeshay ereyada Yurub oo dhan, waxay taasi ka keentay in ereyada Yurub ee ku jira xididka "Xeer", sida qayb ka mid ah ereyga, ay had iyo jeer la xiriiraan "In la shaqeeyo". Waxaan soo xiganayaa, tusaale ahaan, ereyada: "Xeer, ficil, jilaa, macaamil ganacsi, ficil" Dhamaan kuwaas oo laxiriira shaqooyinka.
Tani waxay ansax u tahay dhammaan luqadaha Yurub ee qoyska Greco-Latin, oo ay ku jiraan Ingiriiska. Tusaale ahaan, ereyada: "Ficil" af Faransiis ama Ingiriis; « Jilayaasha et Helitaanka Isbaanish; « Ficil "; Af Talyaani, " ficil Jarmal ahaan, Etc (…). Dhammaantood waxaa saameyn ku leh asliga Giriigga ama xididka " AKT »Ayaa saameyn ku leh eraygii hore Kemit; "KAT" Micnaha, sidoo kale "In la shaqeeyo", laakiin dhawaqyadiisa "K" iyo "A" ay beddeleen booskooda sida ku xusan xeerarka dhawaaqa qaarkood ee ka jira qiyaastii 600 xididdada Griig iyo Latin, kuwaas oo saameyn ku yeeshay ereyada hore ee Bariga Afrika oo ahayd luuqadda lagu daydo. Iyo, haddii aan u qaadanno in mid kasta oo ka mid ah 600 oo xididdani uu saameeyay 10 eray oo keliya mid kasta oo ka mid ah luqadaha Yurub ee ay ka tirsan yihiin qoyska luqadda Greco-Latin, waxaan u qaadan karnaa in ugu yaraan 50 oo ah ereyada Yurub ay saameyn ku yeeshaan ereyadii hore. laga soo bilaabo qaybtan Afrika iyada oo ay uga mahadcelinayaan keliya 000 oo xididdada ama xididdada
Haddii aad tan ku darto saameyn toos ah oo ka mid ah ereyada Yurub ee ereyada qadiimka ahaa ee Masar ee Napoleon Bonaparte ka dibna loo maro ereyada Giriigga ama Latinka ama fikradaha, tani waxay ka dhigan tahay in saameyntani ay ka badan karto wax ka badan 100 oo erey. Si kastaba ha noqotee, aragtiyaha iyo daraasadaha kale ee cilmi baarayaashu waxay sidoo kale muujiyeen saameyn weyn oo ku saabsan ereyadii hore Kemit on luqadaha Semitic sida Carabi iyo Cibraaniga.
Barashada luuqad kale waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya barashada kalmadaha kale si loo tixgeliyo waxyaabo isku mid ah, laakiin sidoo kale baro hab kale oo looga fikiro waxyaalahaas. Luqad kasta oo aan ku hadalno, waxaan ku nool nahay nolol cusub. Ku alla kii yaqaan luqad keliya ayaa hal mar noolaada ”
Sep28 04: 45